Jose Mourinho Oo Xaqiijiyay In David de Gea Uusan U Ciyaari Doonin Manchester United Mar Kale Xilli Ciyaareedkan - Laacib.net
Jose Mourinho Oo Xaqiijiyay In David de Gea Uusan U Ciyaari Doonin Manchester United Mar Kale Xilli Ciyaareedkan
Ka maqnaanshiyaha David de Gea ee ciyaarihii ugu danbeeyay ee Manchester United ayaa waxa ay soo jiidatay dareen badan, iyadoo Jose Mourinho uu sharaxaad ka bixiyay qorshahayaashiisa goolhayaha reer Spain ee inta ka hartay xilli ciyaareedka.
De Gea ayaan ciyaari doonin midkoodna labada kulan ee United uga hartay xilli ciyaareedka, kulanka Premier League ee ay la ciyaarayaan Crystal Palace iyo kulanka Ajax ee finalka Europa League ee Arbacada soo socota ka dhici doona magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Si kastaba, macalinka reer Portugal ayaa xaqiijiyay in De Gea uu sii joogi doono kooxda xilli ciyaareedka danbe.
“Dabcan waxaan dooneynaa in David aan ku aragno isagoo ku soo laabta maalinta United. Waxaan qabaa waqtiga xiga ee uu u ciyaari doono kooxda inay tahay kulanka LA Galaxy ee booqashadeena xagaaga ee Mareykanka.” ayuu yiri Mourinho.
“Joel ayaa ciyaari doona kulanka Crystal Palace, halka Sergio uu ciyaari doono finalka. David waa goolhayaha ugu fiican caalamka, sida cadna waxaan dooneynaa inuu nala sii joogo” ayuu hadalkiisa raaciyay.
De Gea ayaan la soo yeerin kulankii habeenka Arbacada ee ay la ciyaareen Southampton, waxaana la sheegay inuu go’aankaas lama filaan ku ahaa.
United ayay hubaal tahay inay ku dhameysan doonto kaalinta lixaad ee Premier League, wadada kaliya ee ay ugu soo bixi karaan Champions League ayaa ah inay ku guuleystaan koobka Europa League Arbacada Soo Socota.